ओली पक्षका ७ सांसद थपिए राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग, को बन्दै राष्ट्रपति ? – Paluwa Khabar
साउन ६, २०७८ बुधबार 106
विश्वासको मतमा मतदान नगरेका माधव समूहका आठ सांसद जोड्दा अहिले शेरबहादुर देउवासँग १ सय ७३ जनाको समर्थन छ ।
केपी ओली पक्षका बाँकी सात थान सांसदलाई मन्त्री बनाइदिएपछि राष्ट्रपति हटाउन मुस्किल नपर्ने महेश बस्नेतको भनाइ थियो ।
Prevदेउवा सरकारले अ’ त्याधिक मात्रामा खुलाए रोजगारी, यसरी दिनुहोस् रो’ जगार आवेदन? यस्तो छ प्रक्रिया
Nextएसईई रिजल्ट प्रकाशित , यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
लोकप्रिय नायिका श्वेताका श्रीमानको अ’ क्सिजन नपाएर नि’ धन
आजै भयाे बर्दियामा भयानक दु’र्घटना फाेटाे फिचर सहित